A ingubo entsha ingelapha owesifazane ukucindezeleka, ukumphakamisa kwemizwelo, ukwenza usuku esinamafu libalele futhi bajabule. A ingubo yi-odumile wengqephu bathunga ngezandla zabo, futhi ngisho ukunikeza ithemba amakhono abo futhi angenakuvinjwa lwabo.
Dress Cocoon ihlala kahle kunoma iyiphi sibalo: ladies usayizi oluvelele efihla singawanaki amaphutha kodwa inika sibalo ukudlala futhi umusa, intombazane obucayi ethambile unika eguquguqukayo kanye weightlessness, ukudansela isiginci sakhe ongaphakeme ukuphakama futhi ukwenzela ukungena okuncane kakhulu.
Ohlukile lesi ingubo - e Imi. Kahle ukwaziswa okuthile, kanye nobude ingubo umthamo umfece ungavula zonke intombazane ibe indlovukazi yangempela. Material efanelekayo igqoka, kufanele futhi athobele isizini futhi lowo mcimbi uma niyogqokani.
Dress-umfece isithombe sokuthi ubizwa okwethulwa kulesi sihloko, e okuhlukile ubukeka ezahlukene.
Nakhu ukulandisa ingubo zakudala kalula uzenze. Udinga Indwangu based 2.8 ubude (ubude umkhiqizo x 2 + umphetho imvume ivolumu). Ububanzi kufanele kulingane ububanzi umkhiqizo x 2.2 + angabonelela fluffiness. Ngokusekelwe kulezi nemingcele, indwangu kumele kube ukwanele ekuhlanganiseni eyodwa ingubo-umfece nge isiketi ngokulinganisela okugcwele kuze kube maphakathi no-ithole.
Okokuqala kubalulekile ukukhetha ukwaziswa ukuthunga izingubo. Ngenxa cut ethize zalo Indwangu kufanele lube sezingeni elingenza kuhle ukugcina ukuma phansi umfece. Ngenxa yalesi kufanelekile Tweed elingenamikhono. Gqoka obukhulu futhi efudumele. Uma sisebenzisa chiffon noma usilika, ungathola ukwakhiwa lula futhi engavamile, ezifihle emphethweni.
Iphethini: ukwakhiwa kanye nokususwa izinyathelo
Ukuze ukuthunga ingubo, ehlezi ukuma umfece uphelele, udinga ukuthatha izilinganiso yakho:
Osh - girth lentamo selilonke.
DP - ingalo obuphelele (intamo emgqeni ehlombe).
VG - ukuphakama esifubeni.
KU - girth hip.
CI - ubude umkhiqizo.
Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ngoba ekuhlanganiseni izingubo. Ungakwazi thunga umfece nokugqoka "Gucci", usebenzisa i shirt elidala wathungela. Ukuze wenze lokhu, kudingeka wenze izenzo ezithile.
Izigaba isakhiwo iphethini
1) T is eligoqiwe halves futhi nalo izilinganiso entanyeni ayabanjwa, ehlombe. Uma kungekho izikibha, udinga ukuthatha izilinganiso zakho futhi wenze izibalo: 1/6 isinkiyankiya isilinganiso 0.5 = emphinjeni ububanzi. Inani okuholela ihlukaniswe yaba izingxenye 3, backrest ukuphakama eyatholakala. Ukuze lokhu wanezela usayizi 1 cm, futhi ukuphakama entanyeni eyatholakala ngoba emashalofini.
Ukwakha ehlombe, kubalulekile kusukela phansi iphuzu entanyeni ukubekela eceleni 8 cm kanye 2.9 cm perpendicular phansi. Ngalesi iphuzu futhi ngokusebenzisa iphuzu isizinda entanyeni labetibambile emgqeni, kuqhubeka ku njengoba nje kuba eduze obuphelele lilingana ubude bengalo, ngaphambilini kulinganiswa (DP).
2) Down kusukela phansi intamo nesilinganiso iphuzu webele imisiwe ukuphakama (SH) bese yengezwa 15 cm. Ngaphezu kwalokho luyehluka kuye ngokuthi inani izingubo. Kukhula inzuzo, umthamo ngaphezulu bayokhululwa umkhiqizo. Ukuze kwesibuko isithombe kuyanda ingubo 10 cm.
Labetibambile umugqa ovundlile. Ukushiya umugqa ehlombe ixhunywe ovundlile ukuze umugqa wafakwa ebibanjelwe 45 ° kuya ovundlile okuholela.
Ngesikhathi emuva, kanye umugca losemkhatsini esifubeni, imisiwe ingubo obuphelele phansi bubheke imisiwe 1 \_ 4 ON. Iphuzu lapho kutholakala, ixhunywe umugqa ovundlile kwebele.
3) izintambo ukudweba kanye orifice ngoba emashalofini ungenisa kuthiwa ukopishiwe bese usika eduze umugqa ovundlile kwesifuba. Enye ingxenye elizibeka umfanekiso isibuko ukuze emgqeni hose, owesibili - ukubeka eceleni. Imigqa babanjwa. Khona-ke, i-engeli kukalwa kusukela hose 15 cm zombili izinkomba. Amaphuzu ekupheleni etholwe emikhonweni ukuvuleka. Bese wengeza 1 cm bazowenza zonke imigqa ukusika. Kungezwe emgqeni ngezansi kusuka 2 kuya ku-4 cm, kuye indlela onqenqemeni icutshungulwe.
Lapho iphethini esondele, kuze kube ukuthunga ingubo-umfece.
Ukusebenzisa inqubo elula, kungenzeka ukudweba ingubo-umfece ngaphandle kokukhipha izilinganiso.
It kudingeka isebenzele ukufinyelela ishidi elikhulu iphepha lapho ukhangwa iphethini.
isikwele Okokuqala 76 idwetshwa 101 cm. Onxande ke baye emakhoneni unqunywe.
I engenhla oily imigqa ovundlile zilingana ehlombe, ibanga ukusuka umugqa oqondile kuze kube seqophelweni ukuqala umdwebo ububanzi umugqa ehlombe ilingana esifubeni kusukela iphuzu thorax maphakathi ukuze afinyelele eqophelweni lapho entanyeni ehlombe nempumalanga kuhlangane.
I kwaphumela Engxenyeni yokuqala Ithungelwe kusukela emuva ke - esifubeni.
uyonquma emakhoneni elibukhali indlela entsha, okuyinto etholakala emva crosslinking kumiswa Imi emkhonweni.
Ukusebenzisa le ndlela, kuba lula thunga iphethini ingubo-umfece akudingi izibalo ezinembile futhi ugobe. Le dress uthola okubi, voluminous futhi zikhululekile.
I engavamile lokhu model izingubo ukuthi sleeve ukuncishiselwa olulodwa. Ngenkathi kwakhiwa iphethini imikhono round ungenisa kanyekanye ne ingubo. Kungaba ngomfece-emikhonweni ingubo Sew usebenzisa umphetho ehlombe, asikho isidingo ukudweba kanzima umphetho ehlombe. Ngo i samuntu ezinjalo, indwangu Kulula ukuba athwale ehlombe, futhi ngaleyo ndlela kwakha ifomu umfece. Ngo imodeli zasendulo "Gucci" imikhiqizo eyenziwe emuva kancane phambili bent, emkhonweni etholwe kuphela kusukela ngaphambili, kanye umfece ezakhiwe ngokucacile lwamaphethini.
Ukusebenzisa okufana ukwakhiwa lwamaphethini ezichazwe ngenhla ungenza ingubo lapho umphetho zihambisana ngokuzenzakalela phansi, ukwakha umfece.
Ukuze ukuthunga ingubo zisuselwa isikibha elidala, isibonelo, kumele eceleni uhlela phansi umkhiqizo.
Ukuze lokhu kuyadingeka ukudweba trapezoid, whose banzi ilingana base engenhla ububanzi umkhiqizo, icala langasezantsi libe lateral uyalingana oyifunayo umphetho obuphelele (kulinganiswa kwesingezansi kuya wayefisa umkhiqizo obuphelele phansi). I engela ukuthambekela ezinhlangothini lateral we trapezoid kuncike aluhlaza intando phansi noma cha.
I trapezoid okuholela lizoqeda isizinda esikhulu base aphansi kuhlukaniswe ezine ezilinganayo. ingxenye ngayinye ahlukaniswe calantsatfu phansi 3 cm kanye ukuphakama 1/3 ye ubude sihloko kwesingezansi. Ngokwe-imigqa etholakale kukhona izinhlangothi Ihlanganiswe we onxantathu. Ngenxa yokuthi i-usike namabala amancane Indwangu, umphetho dress uzobe zihambisana phansi, ukwakha isimo emgqonyeni-like. Dress-umfece kufanele ibukeke ngokuvumelanayo, ngakho musa nisike amaningi kakhulu - Ungakha umphumela imiphongolo - a umphetho cut bayovuka futhi anikeze roundness sibalo.
Ungakwazi ukuhlobisa ingubo-umfece. Isibonelo "Gucci" iqukethe kuphela ubukhulu izakhi eziyinhloko. A imodeli ngokunginika strangeness ungakwazi thunga, isib, emaphaketheni.
Okokuqala akhethiwe imodeli ephaketheni futhi indawo yayo. Zingaba zangaphakathi nezangaphandle, ujenga noma ngaphandle kwalo. Emaphaketheni senziwa valve, kufihlwe (e umkhiqizo ngokuhlanganyela), ne osezingeni emaceleni.
Inketho esikahle kakhulu ingubo-umfece - ngaphakathi ephaketheni. Kwenze ngokushesha, futhi kubukeka ukucasha kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kulula ukugcina ephaketheni noma ushintshe ifoni, ngenxa imodeli igqoka imikhiqizo umphetho ngeke afuthe.
Lolonga ephaketheni kaningi kuyinto isikwele nge imiphetho kancane babanjwa.
Ukuze enze ephaketheni slotted isihloko ohlangothini reverse of the front ingxenye (iphethini) isicelo ngaphakathi piping kanye tack. Khona-ke wenza umqhewu ingazami ukufinyelela 1 cm kuze kube sekupheleni, futhi izinhlangothi zenziwe notch etshekile. Piping turns up futhi phansi onxantathu kancane nastrachivayutsya.
Ngemva kwalokho, ohlangothini reverse isicelo burlap, okuyinto ngokwayo ukhonza njengelungu ephaketheni. Ukuxoshwa is esikhulu phansi piping, emalungeni ahambelana. Laba bobabili bese otutyuzhivaetsya ugaye izigaba.
It uphendulela ezifihliwe ephaketheni Ukugunda.
Aiguillettes ngezandla - kulula
Yokudonsa intela ku impahla atholwe
Dietressa: imiyalelo kanye nezeluleko abanye